एकै साथ यी दुई परिकारहरु भुलेर पनि नखानुहोस्, नत्र हुन् सक्छ यस्तो खतरा – ताजा समाचार
एकै साथ यी दुई परिकारहरु भुलेर पनि नखानुहोस्, नत्र हुन् सक्छ यस्तो खतरा
शरीरका लागि खानपानको विशेष महत्व हुन्छ । यही खानेकुरामा थोरैमात्र सावधानी पुगेन भने फेरि समस्या उत्पन्न हुन्छ ।शरीरलाई स्वस्थ राख्न विभिन्न प्रकारका फलफुल तथा तरकारी खानुपर्छ । तर यदि दुई प्रकारका फल तथा तरकारी एकसाथ खाइरहनुभएको छ भने एकपटक ध्यान दिन आवश्यक छ । तिनलाई एकसाथ खानु ठीक हुन्छ कि हुँदैंन ? केही फल तथा तरकारी यस्ता हुन्छन्, जसको आपसी मेल हुँदैंन । यस्ता चिज अस्वस्थकरमात्र नभई पेटसम्बन्धी गम्भीर रोगको कारक पनि बन्न सक्छ ।
थाहा पाउनुस्, त्यस्ता फल के हुन् ?
सुन्तला र गाँजर एक यस्ता फल हुन्, जो एकसाथ खानुहुन्न । यी फल एकसाथ खानाले छाति पोल्नेमात्र नभई मिर्गौला फेलसमेत हुन सक्छ ।
यी दुई फलको संयोजन यस्तो खतरनाक हुन्छ कि, यसबाट एनिमिया हुने खतरा हुन्छ । साथै शरीरमा हेमोग्लोबिन असन्तुलन हुन सक्छ । यी दुईलाई एकसाथ खानु बच्चाका लागि हानिकारक हुन सक्छ ।
यी दुई चिजको मिश्रणले खाना पाचनतन्त्रलाई नोक्सान पुर्याउन सक्छ । यिनीहरु पचाउन मुस्किल पर्नेमात्र नभई स्वास्थ्यसम्बन्धी अन्य समस्या पनि निम्तन सक्छ । दुध र दुग्धजन्य खानेकुरामा सुन्तला मिसाउनाले अपचको समस्या निम्तन्छ ।
भुईकटहर र दुध
भुईंकटहरमा मौजुद ब्रोमलोन नामक तत्व जब दुधमा मिसिन्छ त्यसले ग्यास, पेट माड्नु, इन्फेक्सन,टाउको दुखाई, पेट दुखाईजस्ता समस्या निम्तन्छ । त्यसैले फल र तरकारी एकसाथ खानुहुन्न । फलमा चिनीको मात्रा बढी हुन्छ, जसलाई पचाउन मुस्किल पर्छ । पाचन प्रक्रियाका क्रममा फल लामो समयसम्म रहन्छ भने सडेर टक्सिन बन्छ, जसबाट डायरिया, टाउको दुख्ने, इन्फेक्सन, पेट दुख्ने जस्ता समस्या देखा पर्छ ।